China imbasa mveliso kunye nabenzi | UKumkani
Impumelelo yokwenyani kufuneka inikwe ukwamkelwa okubafaneleyo. Iimbasa zethu zodidi oluphezulu lwe-bespoke zitsho kakhulu kunobunzima obuvelisiweyo, ngaphandle kweeshelfu ezinye iindlela.
Yongeza uyilo lwakho, amanani alandelelanayo kunye nesicatshulwa sokukhumbula kwiimbasa ukuqinisekisa ukuba nganye ihlala isisipho esahlukileyo nesikhethekileyo.
Iyafumaneka nakweyiphi na imilo, ubungakanani okanye uyilo olunokuzikhethela iluphu yentambo, kunye negolide, isilivere kunye nobhedu olugqityiweyo.
Ezi mbasa zilungele oonobumba okanye isimbo esinobungakanani. Ingasetyenziselwa ukukhuthaza inkampani, ezemidlalo kwaye isetyenziswe njengesipho sesikhumbuzo kubahlobo, esibonisa ixabiso elifanelekileyo lesazisi somfanekiso.
Olunye ukhetho lokuphucula lunokubandakanya ukongeza i-enamel ethambileyo, isitikha sephepha, ushicilelo lwedijithali, ukupeyinta kunye ne-epoxy.
Iimbasa ze-Zinc alloy zinikezela ngokuguquguquka koyilo ngenxa yenkqubo yokubumba ngenaliti, ngelixa izinto ngokwazo zihlala ixesha elide zinika ezi mbasa ukugqitywa komgangatho. Njengakwimigangatho yoqweqwe lwawo lwe-enamel, ezi ndlela zimbi ze-zinc zingabandakanya imibala emine yoqweqwe kwaye zinokubunjwa nakweyiphi na imilo.
Sikwenza neminye imisebenzi yokuphucula nokuhombisa iimedali. Ukulungiselela le njongo, sibabeka kwi-oxidation okanye kwi-patination ukubenza babonakale badala.
Ixesha lokuvelisa: iintsuku ezili-10-15 zeshishini emva kokuvunywa kobugcisa.
IIMPAWU ZE-SOFT ENAMEL
Iimbasa ze-enamel ezithambileyo zimele eyona mbasa yethu yoqoqosho. Zenziwe nge-stamp yentsimbi okanye nge-iron ene-enamel ethambileyo kwaye zibandakanya i-epoxy resin coating, ekhusela imbasa kwimikrwelo kwaye inike ukugqibezela okuthe tye.
Uyilo lwakho lwesiko lunokubandakanya ukuya kwimibala emine kwaye unokugximfizwa kuyo nayiphi na imilo kunye nokukhethwa kwegolide, isilivere, ubhedu okanye ukugqitywa kwe-nickel emnyama. Ubuncinci be-odolo yobungakanani zii-50pcs.
IIMBONI ZE-HELL ENAMEL
Ezi mbasa zigximfiziweyo zizaliswe zi-vitreous enamel ezinzima, zibanika ixesha elide elingenakulinganiswa. Ngokungafaniyo iimedali zoqweqwe lwawo, Akukho mfuneko yokutyabeka epoxy, ke i-enamel iyagungxula kumphezulu wesinyithi.
Uyilo lwakho lwesiko lunokubandakanya ukuya kwimibala emine kwaye unokugximfizwa kuyo nayiphi na imilo kunye nokukhethwa kwegolide, isilivere, ubhedu okanye ukugqitywa kwe-nickel emnyama. Ubuncinci be-odolo yobungakanani zii-pcs ezingama-25 kuphela.
IZINC ALLOY MEDALS
Zinc ingxubevange iimedali zinika bhetyebhetye kuyilo olumangalisayo ngenxa yenkqubo yokubumba yenaliti, ngelixa izinto ngokwazo zihlala zomelele kakhulu zinika ezi mbasa ukugqitywa komgangatho.
Ipesenti enkulu yeembasa ze-enamel zinamacala amabini, nangona kunjalo xa uyilo lufuna imilo-ntathu okanye imisebenzi emininzi enamacala amabini, emva koko le nkqubo iza eyayo.
Njengakwiimbasa ze-enamel ezisemgangathweni, ezi ndlela zine-alloy zinokubandakanya ukuya kwimibala emine yoqweqwe kwaye zinokubunjwa nakweyiphi na imilo. Ubuncinci be-odolo yobungakanani zii-50pcs.
Egqithileyo Intsimbi yeKrisimesi kunye nesihombiso